Siyaarada weliyadda Turba Bintu Wallac – Kaasho Maanka
Waxaa dalka Lubnaan magaalada Bayruud joogta haweeney weliyad saalixad ah ah oo gaartey darajada ”Caarifad”, waxa ayna cuntaa kalluuun ceeriin keli ah oo cuntada kale xagga Rabbi baa laga soomiyey, waxa ayna cabtaa biyo iyo khamri adag.
Dabcan qofkii caarifnimo gaara khamrigu xalaal buu u yahay, waxa ayna sheegtay in biirka iyo wayntu aysan darajada ay gaartey u habboonayn in kasta oo ay xalaal u yihiin, waxa ayna cabtaa wishki iyo khamriyo kale oo ay darajada aalkoolada ku jirtaa 80% tahay. Sida ay weliyaddaasi sheegtay qofka caarifka ahi heerka uu gaaro ayey ku xiran tahay heerka aalkolada uu cabbaa, waana darajo aad u sarraysa 80%.
Haweeneydaas waxaa magaceeda la yiraahdaa Turba bintu Wallaac, waxa ayna darajada caarifad gaartey labo sano ka hor iyada oo muddo 15 sano ah muriidad ahayd. Markii ay caarifnimada gaartey waxaa looga dabbaal degey caalamka oo dhan. Aad baa haweeneydaas loo barakaystaa, waxa uuna qofkii barakaysanayaa salaaxaa meel jirkeeda ka mid ah, waxaana jirkeeda ugu fadli badan xubinta taran (siilka). Weliba xubinteedaas waxa ugu sii falli badan faruurta midig. Labada faruuryood ee xubinteeda waxa ay ku ka la magacawday Makka iyo Madiina, kintirkana waxa ay u bixisay Quddus, daloolka xubinta (dhuqda) waxa ay u bixisay Qaari Xiraa, waxaana maalin kasta xubinteeda salaaxa oo barakaysta muriiddiin iyo caabiddiin aad u badan oo ka ka la yimid daafaha caalamka.
Qofku haddii uu caarifnimo gaaro in uu isqaawiyaa waa ay u bannaan tahay, dadka kalena cawradiisa in ay arkaan dhibi ku ma jirto shareecada islaamka. Waxaa weliyada Eebbe ee caarifiinta ah ka mid ahaa mid magaciisa la oran jirey Curyaan oo uu macneheedu yahay Qaawane, kaas oo dadka u khudbayn jirey isaga oo qaawan. Qaawanaantu karaamaadkiisa ayey ka mid ahayd.
Walaalahayga muslimiinta ah waxaa la ogaysiinayaa in qofkii haweeneydaas suubban soo barakaysanayaa uu ballan sii dhigto inta uusan safarka diyaaradda gelin, waayo waxaa aad u badan dadka meesha yimaada. Siyaarada laga qaadayo qofkii xubinteeda taranka barakaysanayaa waa saddex kun oo doollar keli ah, qofkii jirkeeda meel kale in uu salaaxo rabana waxaa laga qaadayaa labo kun oo doollar keli ah. Lacagta waxaa la dhiibayaa inta aan caarifadda loo gelin, waxa ayna dhex fadhidaa qasri weyn oo ku raalligelinaya sida mucjisada ah oo loo dhisay iyo alaabta taal. Meesha ay weliyaddu xubinta taranka (siilka) soo ka la hayso ku ma nasan kartid ee qasriga meelo ka mid ah baad cabbaar joogi kartaa. Shaaha iyo kafeegu waa bilaash qasriga gudihiisa, khamrigana waxaa lagaa siinayaa qiime ku raalli geliya. Shaqaale barakaysan oo qalbi furan baad meesha ku la kulmaysaa. Waa dhul awliyo oo buuq la ma oggola! Dhammaantiin waxa aan idin kaga tegayaa safar wanaagsan iyo barakaysi suubban.
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 10th February 2018